Davido togan oo ku jira imtixaanka 'Covid-19' wuxuu weydiisanayaa salaadda - teles relay
Davido Covid-19 togan wuxuu weydiisanayaa salaadda
By bryanekobe On Juun 29, 2020
Fannaanka caanka ah ee reer Nigeria iyo gabayada David Adedeji Adeleke, oo sidoo kale loo yaqaan Davido, wuxuu weydiistay taageerayaashiisa inay u duceeyaan markii uu si wanaagsan u qaatay coronavirus (Covid-19).
Sidee qalabka sidaha cudurka loo yaqaan 'asymptomatic side coronavirus' uu ku dhacay cudurkaas dhowr iyo toban qof,…
Davido oo qoraal ku soo qoray sheekadiisa isla markiiba, wuxuu ka codsaday dhamaan taageerayaasha inay ku xasuustaan ​​ducooyinkooda si uu naftiisa uga badbaadiyo fayraska dilaaga ah ee dila dadka.
Davido iyo saaxiibtiis Chioma ayaa booqday Yurub inta lagu guda jiray faafitaanka fayraska. Waxaan xasuusan karnaa in Davido uu ku dhawaaqay natiijada saaxiibtiis ee ka soo baxda 'Covid-19' inta lagu gudajiray baaritaanada. Wuxuu u aaday boggiisa warbaahinta bulshada si uu u sii gudbiyo farriinta ah in Chioma uu tijaabiyey togan ee Covid-19.
Natiijooyinka ka hor Chioma, Davido wuxuu maray baaritaan kaas oo sidoo kale cadeeyay inuu ku dhacay fayraska. In kasta oo natiijooyinka wiilkooda Ifeanyi wali la yaqaan, haddana hammiyo badan ma ahan kuwa togan.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/davido-demande-des-prieres-alors-quil-se-montre-positif-pour-covid-19/
Gabadha Paris Michael Jackson waxay ku abaalmarisaa isaga sawiro aan la shaacin
sawirada xabaashii Michael Jackson oo u eg qol jiif
Sida duuliyaha loo yaqaan 'asymptomatic side coronavirus' uu ku dhacay cudurkaas dhowr iyo toban qof, oo uu mid dilay - BGR
Qalabka qoriga loo yaqaan 'Gun Gun' Kelly oo barooranaya: fanaaniinta ayaa ku dhawaaqay geerida aabihiis